Warbaahinta Daljir oo xus u samaysay Barnaamijka ka hortaga Burcad-badeedda ee Dapp ‘Sawiro’ – Radio Daljir
Warbaahinta Daljir oo xus u samaysay Barnaamijka ka hortaga Burcad-badeedda ee Dapp ‘Sawiro’
Diseembar 4, 2012 12:10 g 0
Garoowe, Dec 4, Barnaamijka ka horga Burcad-Badeedka ee DAPP oo maalinta Jimcaha ka baxa Radio Daljir ayaa ayaa maanta magalada Garoowe loogu qabtay ?Xuska sanad guuradii 3-aad ee barnaamijka ka hortaga burcad badeedka ?DAPP oo ka baxa warbaahinta baaxada wayn ee Radio Daljir.
Munaasibad ballaaran oo ka dhacday Hotel ka New Rays ee magaalada Garoowe ayaa waxaa kasoo qayb galay Masuuliyiin ka socota Xukuumadda Puntland, Culimo, iyo qaybaha kala duwan ee Warbaahinta.
Bilowga Xafladaani lagu maamusayo Barnaamijka ?DAPP oo 3-sano jirsaday ayaa waxaa faah faahin iyo sababta loo aasaasay barnaamijkaasi ka war bixiyay soosaraha Barnaamijka Maxamad Cabilaahi Cali (Kooshin).
Wuxuu sheegay mudadii uu Barnaamijku socdey inuu ka hortegey khataro badan oo Burcadnimo, islamarkaana uu isbedel ku sameeyey dhalinyaro hore ugu jirtey falalka Burcad-badeedda.
Masuuliyiintii goobta ka hadlay waxaa ka mid ahaa Wsiiru Dawlaha Maaamul Wanaaga Puntland Maxamad Faarax Ciise (Gaashaan) wuxuna sheegay barnaamijkaasi inuu yahay mid wax badan kusoo kordhiyay bulshada Soomaaliyeed lagana faa’iiday xogo badan oo burcad badeedka ku saabsan.
Agaasimaha guud ee wasaarada waxbarashada Puntland Maxamad Cabdiwahaab ayaa Mamulka Radio Daljir iyo howlwadayaashooda ku amaanay sida xilkasnimada ah oo ay bulshada markasta uga wacyi galiyaan falalka foosha xun ee burcad badeedka,wuxuna dhankiisa qiray burcad badeedka dhaqankooda inuu saamayn lixaad leh ku yeeshay waxbarashada dalka.
Barnaamijka DAPP oo xanbaarsan macluumad badan laguna joojin karo falalka burcad badeedka ayaa waxaa sanadkaan lagu soo saa’idiyay fariimo iyo riwaayado ka turjumaya ficilada burcada bada inay tahay mid nabaad guuriisay dhaqan iyo dhaqaale guud ahaanba caalamka.
Ugu danbayn Wasiirka Warfaafinta Puntland Egn.Maxamuud Caydiid Dirir ayaa soo xidhay munaasibada wuxuna mamulka Daljir kula dardaarmay inay sii xoojiyaan barnaamijyada anfaca uga jira bulshada soomaaliyeed.
Caawa iyo Daljir, Salaasa, Dec 4 28,Axmed Nuur Ibraahim (Somali)